Ogaden News Agency (ONA) – War-murtiyeed ka soo baxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya
War-murtiyeed ka soo baxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenia
War-Murtiyeed – Guddiga Fulinta JWXO
Waxaa Shir ku qabsaday taariikhdu markay ahayd 19 -22 bisha Janaayo 2012, goob ku taala gobolka Buckinghamshire ee dalka UK, Guddiga Fulinta Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia. Shirka Guddiga Fulintu oo xubnaha qaarkood habka telecom ahaan ay uga qaybgaleen ayaa lagu falanqeeyay marxallada uu marayo halganka xaqa ah ee Somalida Ogadenia ay ugu jirto siday dalkooda ooga xorayn lahaayeen gumaysiga Itoobiya, xaaladda guud ee ay ku sugan tahay Ummadda Somaliyeed iyo guud ahaa jawiga siyaasadeed ee Geeska Africa iyo adduunkba.
Kadib markuu Guddiga Fulinta JWXO si qoto dheer uga baaraandegay xaaladahaas wuxuu soo saaray qodobadan:
1. In Xaaladda bani’aadami nimo ee Dalka Ogadenia ay ka sii darayso oo cadowga Ummadda Somaliyeed ee Itoobiya ayan waxba ula hadhin sidii ay u gumaadi lahayd Somalida Ogadenia- Ha ahaato; cuno qabatayn xag ganacsi iyo xag mucaawano caalami ah, dil, dhac, kufsi iyo xabasi sharci darro ah oo aan loo kal aaba yeelayn yar iyo wayn toona.
2. In inta Itoobiya ay gumaysiga iyo cadaadiska ku hayso Somalida Ogadenia uu halganku socon doono iyadoo nooc kastoo cadaadin iyo cabudhin ah oy la timaado Itobiya uusan joojin doonin geedi socodka xoraynta Somalida Ogadenia
3. Wuxuu Guddiga Fulinta u hambalyeeyay kuna qanacsan yahay, dadaalka iyo geesinimada ay muujiyeen CWXO oo guulo isdaba jooga ah ka muujiyay goobaha dagaalka, isla markaasna gacan ka gaystay badbaadaada Shacabka Somalida Ogadenia.
4. Wuxuu sidoo kale u hambalyaynayaa Guddiga Fulinta hawl wadeenada iyo Jaaliyaadka dibedda oo si cad u maquuniyay isku daygii cadowga iyo kabo qaadkiisa inuu jahawareer ka abuuro dibedda.
5. Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay si buuxda u garab taagantahay soo celinta qaranimada Somalia, isla markaasna waxay ugu baaqaysaa walaalahooda Somali inay ka koraan qabiilka iyo xukun jaclaysiga oo ay u soo jeestaan danta guud, fahmaana in Itoobiya ay tahay cadow aan marnaba laga yaabin inay dan Soomaaliyeed yagleesho oo ay ka koraan kuwa u adeegaya danaha Itobiya ama ka talo qaata.
6. JWXO waxay diyaar u tahay markii ay abuuranto duruuf ay ugu muuqato inuu saamixi karo wadahadal lagaga hadlayo aaya katashiga Somalida Ogadeniya inay ka qayb qaadanayso haddii uu jiro garab dhex-dhexaadiya iyo goob aamin ah. Wadahadaladaas waa inay ahaadaan mid dhaymaystiran (comprehensive principled negotiations) siduu qeexayo go’aanka Golaha dhexe ee JWXO.
7. JWXO waxay si buuxda u taageersan tahay shacabka Eritrea een walaalaha nahay, saadadooda iyo qaranimadooda in aan lagu soo xadgudbin.
1. JWXO waxay ugu baaqaysaa Qaramada Midoobay inay gutaan waajibkooda ku aadan bad’baada iyo xaqsiinta shacabka Somalida Ogadenia, kaasoo ku qeexan cahdiga Qaramada Midoobay ee ah in shucuubtu ay xaq u leeyihiin aaya-katashigooda iyo inaan dowladna ku xad-gudbi karin xuquuqda insaanka iyo xuquuqda siyaasadeed ee shucuubta. Sidoo kale waxay cadaynaysaa JWXO in Qaramada Midoobay waajibaadkii kaga aadanaa shacabka Somalida Ogadenia ay ka gaabiyeen oo iska indha-tireen si badheedh ah jawr- falka Itoobiya ay u gaysatay Somalida Ogadenia.
2. JWXO waxay ugu baaqaysaa adduun-waynaha in Geeska Afrika uusan degayn ilaa xal waara oo caadil ah laga gaadho qaddiyadda Ogadenia kaas oo ku iman kara oo qudha ayadoo shacabka Somalida Ogadenida afti madax bannaan oo caalamku kormeerayo oo ay aayahooda kaga tashanayaan laga fuliyo, sidaas daraadeed in xalka Geeska Afrika lagu daro xallinta qaddiyadda Somalida Ogadenia
3. JWXO waxay ugu baaqaysa walaalahooda Somali in ay taageeran halganka xaqa ah ee ka socda Ogadenia oo ay ka koraan aragtida maan-gaabnimada ah ee qabiilka ku dhisan oo ay ogaadaan haddii Ogadenia ay xoroowdo Somali oo idil ay dan u tahay oo dhulkoodii oo xoroobay u yahay.
4. Sidoo kale JWXO waxay ugu baaqaysaa shucuubta Itoobiya ee kala duwan in aanay gacan ku siinin taliska Itoobiya gumaadka iyo duudsiga uu ka wado Ogadenia, maadama ay dhalintooda ku baa’bayaan hawdka Ogadenya oo aanay lahayn, lahaana doonina ebidkeed. Inay ka taliyaan sidii shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika ay ugu wada noolaan lahaayeen darisnimo wanaag ku dhisan nabadgalyo, cadaalad iyo iskaashi.
JWXO waxay guud ahaan cambaaraynaysaa siyaasadda gumaysi ee Taliska Ethiopia uu kula dhaqma hayo shacabka Somalida Ogadenia.
Guddiga Fulinta JWXO